UBenni uthi isethenjwa seCity siphazanyiswa yimibiko yokujoyina iSundowns | isiZulu
UBenni uthi isethenjwa seCity siphazanyiswa yimibiko yokujoyina iSundowns
UMcCarthy ufuna iChiefs ithenge oweCape Town City
Cape Town – Umqeqeqeshi weCape Town City, uBenni McCarthy, uthi ukaputeni waleli qembu, uLebogang Manyama, usephazamisekile ngenxa yemibiko eqagula ngokushiya kwakhe kule kilabhu.
UManyama ubelokhu eyamaniswa kwabezindaba neMamelodi Sundowns, yize noma umphathi wamaCitizens, uJohn Comitis, eshaya phansi ngonyawo kwelokuthi lo mdlali weBafana Bafana uzodayiselwa kuphela ikilabhu yase-Europe.
ISport24 ibike ukuthi uManyama wahoxiswa ekubeni yingxenye yesikwati seqembu esadlala emdlalweni owandulela owamanqamu kumqhudelwano weMTN8 nalapho leli qembu elalizobhekana khona neWits ngemuva kokuhilizisana noMcCarthy.
OLUNYE UDABA: IChiefs ithi isimthungatha umhlaba wonke umgadli
Khonamanjalo, ngemuva kokuthi iCity ishaye iWits ngo-1-0, uMcCarthy uthe uyasiqonda isimo esinzima esibhekene noManyama futhi ukholwa ukuthi yikhona okulungele kakhulu umdlali kanye neqembu ukuthi lo mdlali oneminyaka engu-26 ubudala angadlali.
“Ngivele ngazizwa kanjalo ngezinguquko engazenza ngesonto eledlule eqenjini,” uMcCarthy ucashunwe esho kanjalo yi-website yeKickOff.
“Ngishiye uLebo (Manyama) ngaphandle futhi ngokusobala angikutholanga lokho engangikufuna emdlalweni [wakhe] sibhekene nePlatinum Stars, ngenxa yayo yonke into eyayenzeka kwabezindaba, ngokuthi ‘uzohamba noma uzohlala’.
UBenni uthi ubonile ngesonto eledlule ukuthi umqondo walo mdlali ukwenye indawo. “Ubesejimini, ubekhona kodwa ziningi izinto abenazo ezenzakalayo. Ngikhulumile naye, futhi ngokusobala lowo umuzwa engiwutholile.”
UBenni uthi akafuni abalandeli baqale bagxeke lo mdlali uma ngabe engasenzi kahle ngenxa yokuthi umqondo wakhe ukwenye indawo.
I-Ajax ixoshe umdlali 'osolwa ngokweba'
Kubikwa ukuthi i-Ajax Cape Town isimxoshile umdlali wayo u-Erwin Isaacs, kulandela ukuqondiswa izigwegwe.
IBafana Bafana inqabe isimemo, ifuna umdlalo oqinile
IBafana Bafana inqabe isimemo sokuba yingxenye yomqhudelwano waminyaka yonke iKing’s Cup, ozobanjelwa eThailand ngenyanga ezayo.
Sisasethubeni lokuthatha eseligi - 'Rama'
URamahlwe Mphahlele kuyamjabulisa ukubuyela enkundleni kulandela ukwelulama kwakhe njengoba ebelimele.
UNkosikazi kaRamaphosa udadewabo kaMotsepe impunyela yakuleli
Kusaqhubeka ukufunwa kuka-Ajay Gupta noDuduzane Zuma
Cpt: 16-23°C Pta: 21-28°C
Jhb: 18-26°C Bloem: 18-28°C
Dbn: 22-27°C PE: 18-24°C
Alberton - 07:42:42 AM HEAVY TRAFFIC between Swartkoppies Road and the N12 Reading Interchange Ezinye zasemigwaqeni